काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लकडाउन भन्दा कडाः के गर्न हुने र के गर्नु नहुने ? - दर्पण संसार
काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लकडाउन भन्दा कडाः के गर्न हुने र के गर्नु नहुने ?
२०७७ भाद्र ४, बिहीबार ०२:४६ बजे
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा आज(विहीबार) देखि निषेधाज्ञा लागू भएको छ ।
मध्यरात देखि लागू भएको निषेधाज्ञाको आदेशानुसार यसपाली भने प्रहरीले अत्यावश्यक बाहेकका गतिविधिमा खुबै कडाई गर्ने भएको छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले मर्निङ वा इभिनिङ वाक जान्छु भन्ने निस्कनेलाइ पनि संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कारवाही हुने चेतवानी दिनुभएको छ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलिँदै गएकाले यसअघि बनदाबन्दीमा अपनाइएको सहजीकरणसमेत यसपाली हुने छैन । कुनै सवारी पाससमेत जारी गरिने छैन ।
त्यसैले बन्दाबन्दी भन्दा आज रातिदेखि लागु भएको निषेधाज्ञाको आदेश थप कडा हुनेछ ।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुबेर कडायतले प्रशासनको निर्णयअनुसार महानगरीय प्रहरी कार्यालयमार्फत आवश्यक ड्युटी खटाउनेदेखि तयारीका सबै व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिनुभयो । आदेश पालनामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँले बताउनुभयो ।